Paroxetine (ပါရိုစီတင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Paroxetine (ပါရိုစီတင်း)
Paroxetine (ပါရိုစီတင်း) ကဘာလဲ။
Generic Name: Paroxetine (ပါရိုစီတင်း) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Paroxetine (ပါရိုစီတင်း) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
စိတ်ကစဉ့်ကလျားရောဂါ၊ ထိန်းမရအောင်ကြောက်လန့်ခြင်းရောဂါ၊ တစုံတစ်ခုကိုတမ်းတမ်းစွဲတပ်မက်ခြင်း၊ အာသာဆန္ဒမထိန်းနိုင်ခြ င်း (OCD)၊ စိုးရိမ်ခြင်း၊ ထိခိုက်မှုနောက်ပိုင်းပြဿနာများကိုကုသရာမှာ သုံးပါတယ်။ ဦးနှောက်ထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်း (serotonin) တွေကို အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။
selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI)ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်၊ အအိပ်၊ အစား၊ စွမ်းအင်၊ နေ့စဉ်ဘဝအပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုရှိခြင်းကိုပြန်လည်ရရှိနိုင်ခြင်း တို့ကိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။ ကြောက်လန့်ခြင်း၊ စိုးရိမ်ခြင်း၊ မလိုလားတဲ့အတွေးများ၊ ထိန်းမရအောင်ေကြောက်လန့်ခြင်းအကြိမ်ရေကို လျော့နည်းစေပါတယ်။ နေ့စဉ်ဘဝကိုထိခိုက်စေတဲ့ လက်ခဏခဏဆေးခြင်း၊ ရေတွက်ခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်းစတဲ့ အာသာဆန္ဒကိုမထိန်းနိုင်ခြင်းကဲ့သို့သော ခဏခဏပြုလုပ်ချင်နေသည့်ဆန္ဒကို လျော့စေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်းထန်တဲ့ဓမ္မတာမလာခင်အကြိုရောဂါစု ( ဓမ္မတာအကြိုကျေနပ်မှုခေါင်းပါးကြောင့်ကြရောဂါ) ကိုကုသရာမှာလည်းသုံးပါတယ်။ မီးယပ်သွေးဆုံးချိန်မှာ ဖြစ်တဲ့ အပူအဖိမ့်တွေကိုလည်း ကုသနိုင်ပါတယ်။
Paroxetine (ပါရိုစီတင်း) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း တိတိကျကျ သောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးညွှန်းစာမှာပါတဲ့အတိုင်း အကုန်လိုက်နာသင့်ပါတယ်။ ဆရာဝန်က ဆေးပမာဏကိုပြောင်းလဲပေးနိင်ပါတယ်။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ပမာဏထက် ပိုပေးတာတွေလျော့ပေးတာတွေ အချိန်ပိုကြာပေးတာတွေ မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ထုတ်ပေးမှုချဲ့ပေးတဲ့ဆေးပြားပုံစံကို ချေကျိတ်တာတွေ၊ ဝါးစားတာ၊ ပိုင်းတာမျိုးတွေမလုပ်သင့်ပါဘူး။ တစ်ပြားလုံးကိုမျိုချရ မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးပမာဏမတိုင်းတာခင်မှာ အမှုန်များပါတဲ့အရည်ပုံစံဆေးကို သေချာခါပေးသင့်ပါတယ်။ အရည်ဆေးကို တိုင်းတာတဲ့ဆေးထိုးပြွန်၊ ဇွန်း၊ ခွက် စတာတွေနဲ့ တိုင်းတာပါ။ မရှိဘူးဆိုရင် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူဆီမှာ မေးနိုင်ပါတယ်။
လက္ခဏာတွေမသက်သာခင် လေးပတ်လောက်သောက်ရနိုင်ပါတယ်။ သင့်လက္ခဏာတွေမသက်သာလာဘူးဆိုရင် ဆေးညွှန်းအတိုင်းဆက်သုံးပြီး ဆရာဝန်ကိုပြောရမှာစြဖ်ပါတယ်။ မကောင်းတဲ့ဆေးဖြတ်လက္ခဏာတွေပေါ်လာနိုင်တာကြောင့် ရုတ်တရက်ကြီးမရပ်လိုက်ပါနဲ့။ စိတ်ချရစွာဘယ်လိုရပ်လိုက်ရမလဲဆိုတာကို သင့်ဆရာဝန်ကိုမေးသင့်ပါတယ်။ ဆေးလျှော့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြိး သင့်ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်း လိုက်နာပါ။
Paroxetine (ပါရိုစီတင်း) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Paroxetine (ပါရိုစီတင်း) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
paroxetine သို့ အခြားသောဆေးများနဲ့ ဓါတ်မတည့်မှုတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်
MAO inhibitorတွေကို လွန်ခဲ့တဲ့၁၄ရက်ကအသုံးပြုနေမယ်ဆိုရင် သို့ paroxetineဆေးအသုံးပြုပြီးနောက်၁၄ရက်အတွင်း မသုံးသင့်ပါဘူး။ ကြီးမားတဲ့အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်နိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ ( isocarboxazid, linezolid, methylene blue injection, phenelzine, rasagiline, selegiline, or tranylcypromineကဲ့သို့သော ) ။ paroxetineဆေးရပ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်း MAO inhibitorစမသုံးခင် အနည်းဆုံး၁၄ရက်စောင့်ရပါမယ်။
အချို့သောငယ်ရွယ်သူတွေမှာ ပထမဆုံးအသုံးပြုချိန် သတ်သေချင်တဲ့အတွေးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်အခြေအနေတိုးတက်လာမလာသိနိုင်ဖို့ သင့်ဆရာဝန်ဆီကို ပုံမှန်ပြသနေသင့်ပါတယ်။ သင့်မိသားစု သို့ အခြားအုပ်ထိန်းသူတွေအနေနဲ့ သင့်ရဲ့ပြောင်းလဲလာတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေ လက္ခဏာတွေကို သတိပြုနေဖို့လိုပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Paroxetine (ပါရိုစီတင်း) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Paroxetine (ပါရိုစီတင်း) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဒီဆေးကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့် အောက်ပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ အသစ်တွေ လက္ခဏာအသစ်တွေဆိုးဆိုးရွားရွားတွေ တွေ့ရမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ ( ခံစားချက်အမူအကျင့်များ ပြောင်းလြဲခ်င်း၊ စိုးရိပ်ခြင်း၊ ထိန်းမရောအင်လန့်ခြင်း၊ အိပ်စက်ရာတွင်အခက်အခဲရှိခြင်း၊ စိတ်လိုက်မာန်ပါလုပ်ခြင်း၊ စိတ်ကသိကေအောက်ဖြစ်ခြင်း၊ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြခြင်း၊ ရန်လိုခြင်း၊ ကနာမငြိမ်ခြင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတက်ကြွမှုလွန်ကဲခြင်း၊ စိတ်ပိုကျခြင်း၊ သတ်သေလိုသည့်အတွေးများ သို့ နာကျင်စေလိုသည့်အတွေးများ)
အောက်ပါပြင်းထန်တဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို တွေ့ရမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်ချက်ချင်းခေါ်သင့်ပါတယ်။
အတွေးများထိန်းမရြခ်င်း၊ အိပ်ဖို့မလိုခြင်း၊ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အမူအကျင့်များ၊ အလွန်အမင်းပျော်ခြင်းဝမ်းနည်းခြင်း၊ အရင်ထက်စကားပိုများခြင်း
အမြင်ဝါးခြင်း၊ ဥမင်သဖွယ်မြင်ခြင်း၊ မျက်လုံးနာခြင်းရောင်ခြင်း၊ အလင်းကွင်းများမြင်ခြင်း
ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲအရိုးနာခြင်း၊ ရောင်ခြင်း ၊ ပေါက်ပြဲခြင်း
အလွယ်တကူပေါက်ပြဲလွယ်ခြင်း၊ သွေးထွက်လွယ်ခြင်း( နှာခေါင်း၊ ပါးစပ်၊ ယောနိလမ်ကြောင်း၊ အူမကြိး) ၊သွေးချောင်းဆိုးခြင်း
အရေပြားဆိုင်ရာပြင်းထန်တဲ့တုန့်ပြန်မှုများ – ဖျားခြင်း၊ လည်ချောင်းနာခြင်း၊ မျက်နှာလျှာရောင်ခြင်း၊ မျက်လုံးပူခြင်း၊ အရေပြားနာခြင်း၊ အနီရောင်အပြာရောင်အဖိမ့်များ ပျံ့နှံ့နေခြင်း (အထူးသဖြင့်မျက်နှာနှင့်ခန္ဓါကိုအပေါ်ပိုင်းယ်ပေါ်တွင်)ပေါက်ပြဲခြင်း၊ ကွာကျခြင်း
အားနည်းခြင်း၊ အိပ်ချငိမူးတူးဖြစ်ခြင်း၊ မူးဝြေခ်ငး
ချွေးထွက်ခြင်း၊ စိုးရိမ်ခြင်း၊ တုန်ခါခြင်း
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုနည်းခြ်ငး၊ မြုံခြင်း၊ ကာမဆက်ဆံရာတွင်ပြီးမြောက်ဖို့အခက်အခဲရှိခြင်း
ဘယ်ဆေးတွေက Paroxetine (ပါရိုစီတင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Heart rhythm medicine နှလုံးခုန်ခြင်းဆိုင်ရာဆေးများ
Certain medicines to treat narcolepsy ထိုင်းမှိုင်ခြင်း or ADHD – amphetamine, atomoxetine, dextroamphetamine, Adderall, Dexedrine, Evekeo, Vyvanse, and others
စိတ်ကြွစေတဲ့ အနာသက်သာဆေးများNarcotic pain medicine – fentanyl, tramadol
Medicine to treat anxiety, mood disorders, thought disorders, or mental illnessစိုးရိမ်ခြင်း၊ ခံစားချက်အပြောင်းအလဲများ၊ အတွေးအပြောင်းအလဲများ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကုသသည့်ဆေးများ – such as buspirone, lithium, other antidepressants, or antipsychotics
ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ရောဂါအတွက်ဆေးများMigraine headache medicine – sumatriptan, rizatriptan, zolmitriptan, and others
အတက်ရောဂါအတွကါဆေးများSeizure medicine – phenobarbital, phenytoin
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Paroxetine (ပါရိုစီတင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Paroxetine (ပါရိုစီတင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
နှလုံးရောဂါ၊ သွေးတိုး၊ လေဖြတ်ဖူးခြင်း
စိတ်ကျစိတ်ကြွခြင်း၊ ဆေးစွဲဖူးခြင်း။ သတ်သေလိုသည့်အတွေးများဝင်ဖူးခြင်း
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Paroxetine (ပါရိုစီတင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အစောပိုင်းကာလ- 20 mg သောက်ဆေး တစ်နေ့တစ်ကြိမ် အစာနဲ့တွဲပြိး သို့ အစာမပါဘဲ ၊ အများအားဖြင့် မနက်ပိုင်း
ရောဂါထိန်းသိမ်ေးရန်ဆက်အသုံးပြုသင့်သည့်ပမာဏ- 20 mg to 50 mg သောက်ဆေး တစ်နေ့တစ်ကြိမ် အစာနဲ့တွဲပြိး သို့ အစာမပါဘဲ ၊ အများအားဖြင့် မနက်ပိုင်း
ဆေးပမာဏအပြောင်းအလဲ – တစ်နေ့ 10 mgတစ်ပတ်ခြားတစ်ခါအနည်းဆုံး တိုးပေးခြင်း
အစောပိုင်းပမာဏ- Paroxetine- naive patients: : 25 mg သောက်ဆေး တစ်တေစ်ကြိမ် အစာနဲ့တွဲပြိး သို့ အစာမပါဘဲ ၊ အများအားဖြင့် မနက်ပိုင်း
ဆေးအပြောင်းအလဲ- 30 mgချက်ချင်းထုတ်ပေးတဲ့ဆေးပုံစံက 37.5 mgထုတ်ပေးမှုချဲ့ပေးတဲ့ဆေးပြားပုံစံနဲ့ တူညီပါတယ်။
ရောဂါထိန်းသိမ်ေးရန်ဆက်အသုံးပြုသင့်သည့်ပမာဏ- အစောပိုင်းပမာဏကို အများဆုံး 62.5 mgတစ်နေ့စာ တိုးပေးခြင်း
းဆေးပမာဏအပြောင်းအလဲ – တစ်နေ့ 12.5mgတစ်ပတ်ခြားတစ်ခါအနည်းဆုံး တိုးပေးခြင်း
ဂရုပြုရမည့်အချက်- ထုတ်ပေးမှုချဲ့ပေးထားတဲ့ဆေးပြားတွေကို တစ်ပြားလုံးမျိုချရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဝါးစားခြင်းကျိတ်ချေခြင်းမပြုပါနဲ့။
ရောဂါထိန်းသိမ်ေးရန်ဆက်အသုံးပြုသင့်သည့်ပမာဏ- 60mg အထိ သောက်ဆေး တစ်နေ့တစ်ကြိမ် အစာနဲ့တွဲပြိး သို့ အစာမပါဘဲ ၊ အများအားဖြင့် မနက်ပိုင်း
အစောပိုင်းပမာဏ-: 12.5 mg သောက်ဆေး တစ်တေစ်ကြိမ် အစာနဲ့တွဲပြိး သို့ အစာမပါဘဲ ၊ အများအားဖြင့် မနက်ပိုင်း
ရောဂါထိန်းသိမ်ေးရန်ဆက်အသုံးပြုသင့်သည့်ပမာဏ- အစောပိုင်းပမာဏကို အပတ်စဉ် 12.5 mgတိုးပေးခြင်းဖြ်င့် အများဆုံး 37.5 mgတစ်နေ့စာ တိုးပေးခြင်း
းဆေးပမာဏအပြောင်းအလဲ – တစ်ပတ်ခြားတစ်ခါအနည်းဆုံး တိုးပေးခြင်း
အစောပိုင်းကာလ- 10 mg သောက်ဆေး တစ်နေ့တစ်ကြိမ် အစာနဲ့တွဲပြိး သို့ အစာမပါဘဲ ၊ အများအားဖြင့် မနက်ပိုင်း
ရောဂါထိန်းသိမ်ေးရန်ဆက်အသုံးပြုသင့်သည့်ပမာဏ- 40mg အထိ သောက်ဆေး တစ်နေ့တစ်ကြိမ် အစာနဲ့တွဲပြိး သို့ အစာမပါဘဲ ၊ အများအားဖြင့် မနက်ပိုင်း။ 60 mg အထိသောက်ဆေး တစ်နေ့တစ်ကြိမ် မနက်ပိုင်း
အစောပိုင်းပမာဏ- Paroxetine naive patients:: 12.5 mg သောက်ဆေး တစ်တေစ်ကြိမ် အစာနဲ့တွဲပြိး သို့ အစာမပါဘဲ ၊ အများအားဖြင့် မနက်ပိုင်း
ရောဂါထိန်းသိမ်ေးရန်ဆက်အသုံးပြုသင့်သည့်ပမာဏ- အစောပိုင်းပမာဏကို အပတ်စဉ် 12.5 mgတိုးပေးခြင်းဖြ်င့် အများဆုံး 75 mgတစ်နေ့စာ တိုးပေးခြင်း
ဆက်တိုက်သို့ တလှည့်စီ၊ 12.5 mg သောက်ဆေး တစ်တေစ်ကြိမ် အစာနဲ့တွဲပြိး သို့ အစာမပါဘဲ၊ အများအားဖြ်င့် မနက်ပိုင်း ရာသီစက်ဝိုင်းရဲ့လူတီယယ်ကာလတွင်း ( ရာသီသွေးဆင်းမခင်၁၄ရက်အလို)
ရောဂါထိန်းသိမ်ေးရန်ဆက်အသုံးပြုသင့်သည့်ပမာဏ- 12.5 mg သောက်ဆေး တစ်တေစ်ကြိမ် အစာနဲ့တွဲပြိး သို့ အစာမပါဘဲ ၊ အများအားဖြင့် မနက်ပိုင်း စမ်းသပ်သုံးစွဲမှုတွေမှာ အကျိုးသက်ရောက်မှုပေးပါတယ်။ ရာသီစက်ဝန်း၃ခါထက်ပိုပြီးတော့ အကျိုးသက်ရောက်မှုမပေးနိုင်သေးပါဘူး။ တည့်တယ်ဆိုရင် ဆက်တိုက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ရောဂါထိန်းသိမ်ေးရန်ဆက်အသုံးပြုသင့်သည့်ပမာဏ- 40mg အထိ သောက်ဆေး တစ်နေ့တစ်ကြိမ် အစာနဲ့တွဲပြိး သို့ အစာမပါဘဲ ၊ အများအားဖြင့် မနက်ပိုင်း
60 mg အထိသောက်ဆေး တစ်နေ့တစ်ကြိမ် မနက်ပိုင်း
ရောဂါထိန်းသိမ်ေးရန်ဆက်အသုံးပြုသင့်သည့်ပမာဏ- 20 to 50 mg အထိ သောက်ဆေး တစ်နေ့တစ်ကြိမ် အစာနဲ့တွဲပြိး သို့ အစာမပါဘဲ ၊ အများအားဖြင့် မနက်ပိုင်း
Brisdelle (R)တစ်မျိုးတည်းသာလျှင် ဈေးကွက်မှာရောင်းချဖို့ ခွင့်ပြုထားပါတယ်။ မပြင်းထန်ရာကနေ ပြင်းထန်တဲ့ သွေးဆုံးခြင်းဆက်နွှယ်တဲ့သွေးကြောလှုပ်ရှားခြင်းလက္ခဏာများအတွက် – 7.5 mgသောက်ဆေး တစနေ့်တစ်ကြိမ် ညအိပ်ရာဝင်ခါနီး အစာနဲ့ သို့ အစာမပါဘဲ
ကလေးတွေအတွက် Paroxetine (ပါရိုစီတင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Paroxetine (ပါရိုစီတင်း) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
ဆေးတောင့်ပုံစံ 7.5 mg